Ukukhiqizwa kwe-calcium nitrate kuzovulwa kuVeliky Novgorod - umagazini i- "Potato System"
main Izindaba zezimboni
в izindaba, Izindaba zezimboni
I-Acron Group, engomunye wabakhiqizi abahamba phambili bomanyolo wamaminerali eRussia nasemhlabeni jikelele, endaweni yayo yokukhiqiza eVeliky Novgorod isebenzisa iphrojekthi yokwakha isitshalo sokukhiqiza i-granular calcium nitrate (calcium nitrate) enamandla angamathani ayizinkulungwane eziyi-100 ngonyaka. Umthamo wokutshalwa kwemali uzoba cishe ama- $ 22 million. Idethi yokuqala ukukhiqizwa ingu-2022.
Okusetshenziswayo kukamanyolo omusha kuzoba yi-calcium nitrate engamanzi, umkhiqizo ovela ekucubunguleni i-apatite concentrate ekukhiqizeni umanyolo oyinkimbinkimbi we-NPK. Ukukhiqizwa kwamamaki ahlukahlukene we-calcium nitrate kuhlelwe: kwezolimo kanye nakwezimboni. Phakathi kwemikhiqizo yezolimo, kuzokhiqizwa lezo ezihloselwe ukufaka isicelo ngqo emhlabathini ovulekile futhi oncibilikayo ngamanzi ezindlini zokugcina izithombo.
Iphrojekthi izokwenziwa ngezigaba ezimbili. Ekuqaleni, kuzosebenza iyunithi yokuhlanzwa nokulungiswa ketshezi lwe-calcium nitrate kusuka ekungcoleni kokudluliselwa okulandelayo kwe-calcium nitrate eworkshop. Isigaba sesibili sihlose ukwakhiwa kwesitshalo esikhanyelayo, esenzelwe ukubheka ubuchwepheshe obuseqophelweni eliphezulu be-multilayer pelletizing esigubhini esinombhede owakhelwe ngaphakathi oketshezi. Isikimu sobuchwepheshe sizobandakanya amayunithi okususa ama-granules atholakele, ukuchoboza, ukupholisa nokupakisha umkhiqizo ophelile.
Indawo yokugcina izokwakhiwa ukuze kufakwe umanyolo. Kuhlelwe ukuthumela imikhiqizo ngesitimela nangomgwaqo ezikhwameni, ukwelula ama-hoods kanye nezikhwama ezinkulu.
“Ukwakhiwa kwesitshalo se-calcium nitrate kungumsebenzi obalulekile ohlelweni lokutshala imali luka-Acron lowezi-2025. Esizeni sethu saseNovgorod, okokuqala ngqa eRussia, sizothola umkhiqizo ofunwayo osuselwa ku-calcium nitrate ngamandla amakhulu, ngakho-ke, sizoqhubeka nokwandisa amandla okukhiqiza, ulayini womkhiqizo futhi sihlangabezane nezinselelo zemakethe, "kusho u-Alexander Popov, uSihlalo we iBhodi labaPhathi be-Acron.
I-calcium nitrate noma i-calcium nitrate ngumanyolo osetshenziswa kakhulu kwezolimo. Ikhiqizwa ngendlela kasawoti wamakristalu futhi incibilika kakhulu emanzini. Iqukethe i-calcium engu-19% futhi cishe ibe ngu-13% we-nitrogen. Isetshenziswa ezinhlotsheni ezahlukahlukene zenhlabathi, kepha isebenza kakhulu enhlabathini ene-sod-podzolic.